लगभग कुनै पनि ठूलो मात्रा निर्माण प्रक्रिया ठोस मिश्रण प्रयोग समावेश छ। समाधान कार्य जग को गठन मा एक आधार, यो पर्खाल ठाडो रूपमा मिल्दाजुल्दा प्रदर्शन र अन्य कार्यहरू कार्यान्वयन। यस मामला मा, ठोस को बाहिरी ugliness चिन्ता छैन जो कोहीले - यो चलाखीपूर्ण सामना सामाग्री, यो nuance छुटकारा छैन धेरै समस्या camouflages। प्रकाश प्रसारण - तैपनि, हंगेरी इन्जिनियर Aron Loshontsi अर्को गुण को खैरो सामाग्री विशेषताहरु को सूची बनाउन निर्णय गरे। त्यसैले परम्परागत मिश्रण देखि मतभेद को एक धेरै छ जो एक स्पष्ट ठोस Illumicon, त्यहाँ थियो। यो कारणले गर्दा प्रविधी निर्माण गर्न, उपस्थिति, तर पनि मूल संरचना गर्न मात्र होइन लागू हुन्छ।
अहिलेसम्म आधार राम्रो सिमेन्ट आम देखि तयार एक साधारण समाधान छ। आफै गरेर, प्रविधि मात्र असामान्य आधार मिश्रित र fiberoptic फाइबर को सामान्य मिश्रण गरेर ठोस को प्रतिनिधित्व क्रान्तिकारी छ। यो मुद्दा, दूरसंचार नेटवर्क प्रयोग गरिन्छ जो। यी घटक को संयोजन र गठन पारदर्शी ठोस कारण छ। स्टक समाधान को संरचना पनि अनुसार प्रौद्योगिकी आवश्यकताहरु संग सिमेन्ट र पानी प्रयोग प्रदान गर्दछ। फाइबर लागि जाँदा, आफ्नो मापदण्डहरू विशिष्ट मापदण्ड द्वारा चयन गरिएका छन्।
सामान्यतया, यो प्रविधी अप्टिकल तत्व को प्रतिशत सामग्री नाघ्यो 5% जसमा जनता तयार सिफारिस गरिएको छैन। यो सामाग्री को बल र स्थायित्व असर गर्छ। अर्कोतर्फ, फाइबर सामग्रीको प्रतिशत धेरै गुणवत्ता मा निर्भर गर्दछ, पारदर्शिता हुन्छ। प्रायजसो, पारदर्शी ठोस एक मोटाई कम2मिलिमिटरमा भइरहेको फाइबर प्रयोग गरे।
सिर्जना को परम्परागत ठोस विधि जस्तै, यो मामला मा, काम formwork को व्यवस्था सुरु। अर्को, समाधान यसलाई मा हालिएको थियो। यो नै ठोस मिश्रण फरक विशेषताहरु संग घटक समावेश गर्न निमित्त, याद महत्त्वपूर्ण छ। त्यहाँ राम्रो समाधान हो, र केही अवस्थामा रोडा थप्न उपयुक्त छ। यो एक ठूलो अंश संग fillers को समावेश नगरी पहिलो संस्करण उच्च गुणस्तरीय पारदर्शी ठोस प्राप्त गर्न अनुमति दिन्छ थियो। फाइबर ओप्टिक किसिमहरु को आवेदन को प्रविधि सुदृढीकरण एक प्रकारको प्रदान गर्नुहोस्। दृश्यात्मक सुनिश्चित गर्ने क्षमता - फाइबर नियुक्ति को शुद्धता पनि सामाग्री को प्रमुख विशेषताहरु निर्भर गर्दछ। एक ठोस निर्माण को शास्त्रीय विधि अर्को मौलिक भिन्नता सुधार पहिले नै स्थिर समाधान गर्न आवश्यक छ। पहिलो, फारम shuttering को पत्थर को खम्बा इच्छित आकार को व्यक्तिगत ब्लक मा कटौती गर्न सकिन्छ, जो पछि, जारी छ। दोश्रो ध्यान litrakon गठन पलिश।
सुविधाहरू पारदर्शी ठोस
जस्तै, M250 चिन्ह - आधार सामाग्री एकदम सामान्य राम्रो समाधान भएकोले यसको प्राविधिक गुण पारंपरिक ठीक ठोस गर्न समान छन्। तथापि, ग्लास फाइबर को रूप मा विदेशी तत्व को बारे मा 5% को उपस्थिति अझै पनि मतभेद को एक नम्बर हुन्छ। घनत्व आदर, यो 2100 देखि 2400 केजी / m3दायरा। यो आंकडा को फोम र aerated ठोस समकक्षों नाघ्यो, तर litrakon घनत्व विरुद्ध भारी यौगिकों संग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैन। तर पारदर्शी ठोस राम्रो पानी प्रतिरोध र चिसो प्रतिरोध प्रदर्शन। औसत compressive बल ठूलो भवनहरु निर्माण अवधिमा आधारभूत रूपरेखा रूपमा प्रयोग प्रकाश पुस्तिका सामाग्री अनुमति गर्दैन हुनाले यसलाई सुरुमा सामाग्री मा लोड गणना गर्न मनमोहक छ। तपाईं अझै पनि प्रदर्शन litrakona महत्वपूर्ण संरचना को कार्य छ भने, यो थप plasticizers र बल वृद्धि additives बनाउन को लागि विकल्प विचार राम्रो छ।
अझै litrakon यो एक भवन सामाग्री, जो एक उच्च शक्ति भार नियुक्त गर्न सकिन्छ रूपमा प्रयोग को लागि अभिप्रेरित छैन। यसबाहेक, फाइबर सिसा समाधान जग को भर्नु छैन अर्थमा, यो मामला मा प्रकाश प्रसारण व्यक्त गर्न सकिएन रूपमा हुन बनाउन गर्दैन। यसको प्रयोग को मुख्य निर्देशन सजावटी वास्तु रचनाहरूको गुण संग एक यन्त्र हो। र सडक डिजाइन वस्तुहरु र भित्री सजावट सिर्जना सफलतापूर्वक पारदर्शी ठोस प्रयोग गरिएको छ। हुनत प्राविधिक र शारीरिक गुणहरू सामाग्री वेवास्ता छैन यसको प्रयोग, सौंदर्य विचार गर्न मुख्यतया कारण छ। जे भए पनि, litrakona लागि घटक को आधारभूत सेट यो एक पारंपरिक समान बनाउँछ हल्का ठोस, वास्तु सानो निर्माण मा लोड ह्यान्डल जो।
फाइदा र पारदर्शी ठोस को बुरा
यो सामाग्री को मुख्य लाभ जस्तो देखिने disparate प्रदर्शन को एक संयोजन छ। यो सजावटी प्रभाव र शक्ति संभावित, हल्का ठोस को प्रदर्शन संकेतक अनुरूप। को को बुरा लागि जाँदा, विशेषज्ञहरु को औसत बल पनि खातामा लिएको छैन। धेरै महत्त्वपूर्ण उच्च मूल्य। यो पारदर्शी ठोस फाइबर ओप्टिक किसिमहरु समाधान मा समावेश गरिएको छ विनिर्माण को लागत बढ्छ।
कसरी आफ्नो आफ्नै बनाउने?
ठोस सबैभन्दा उच्च गुणस्तरीय प्रदर्शन कारखाना उत्पादन र तयार प्रयोग-गर्न-डिजाइन वस्तुहरु को रूप मा पहिले देखि नै लागू भइरहेको छ। तर यो स्वतन्त्र litrakon चाहेको यदि गर्न सकिन्छ। मुख्य कठिनाई ग्लास फाइबर को बिछाउने सच्याउन हुनेछ। विशेष मिल्स मा पारदर्शी ठोस को उत्पादन कि फाइबर सिसा तहहरू गठन स्वचालित मिसिन को सञ्चालन प्रदान गर्दछ भने, गृह स्वयं काम गर्न पाउनेछन्। पनि formwork निर्माण गठन र थप तहहरू प्रकाश बासना फाइबर को पङ्क्तिहरू छन्। समानान्तर मा एकांतर भरण जलाशय अंश समाधान प्रदर्शन। यसलाई ठोस पर्याप्त सुरक्षा मार्जिन खुलिरहेको छ भनेर, कुल वजन मा फाइबर को एकाग्रता पालन गर्न महत्त्वपूर्ण छ।
एकदम अक्सर, एक भवन सामाग्री को सामान्य रूपको सुधार यसको प्रयोग को दिशा मा परिवर्तन गर्न जान्छ। क्लासिक समाधान संग समानता भए तापनि पारदर्शी ठोस मुख्यतया एक सजावटी वस्तुको रूपमा प्रयोग गरिएको छ। एक विश्वसनीय शक्ति आधार लागि यो सामान्य योगों, सौंदर्य अपील प्रयोगमा कुनै मूल्य छ जो प्रयोग गर्न उचित छ। Litrakon, त्यसको विपरीत, छैन विशेष रोचक क्षमता बोकेको को मामला मा छ, तर सबै भन्दा राम्रो तरिका मूल डिजाइन तत्त्वहरू को रूप मा प्रकट गरिएको छ।
आफ्नो हातले ठोस लागि सफ्नर। ठोस admixtures
इन्सुलेशन "TECHNOROOF B60": प्राविधिक विनिर्देशों, आवेदन, र सञ्चालन सुविधाहरू
Remodeling र मरम्मत ख्रुश्चेव
एचआईभी र कसरी यो निदान गर्न के हो?
द्वितीय विश्व युद्ध हताहत। दोस्रो विश्व युद्ध को समयमा चीन
एलसीडी, सेन्ट पीटर्सबर्ग "Swallow": निर्माण, विकासकर्ता को प्रगति, योजना अपार्टमेन्ट र समीक्षा
को घृणा मुखासे को अप्रत्याशित कारण
रोग रोक्न तरिका: को क्यान्सर रोकथाम
कम्पनीहरु को दर्ता - कसरी औषधालय र औषधि लाइसेन्स खोल्न?
"Betsiti": कर्मचारी र खेलाडीहरूबाट प्रतिक्रिया